Indlu encinci "La Bergerie" / iLa petite maison - I-Airbnb
Indlu encinci "La Bergerie" / iLa petite maison
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uLaetitia iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Ifakwe kwilizwe, kwilali encinci ethandekayo kwipropathi yethu (sihlala kwindlu ekufuphi). Kufuphi neSt James way, indlu encinci ilinde wena kunye nosapho lwakho. Uya kwenza imisebenzi ngokunxulumene nendalo (amahlathi, iinduli, imilambo, iindlela ezininzi zokuhamba intaba). Uya kutyelela iindawo eziphawulekayo njengeLe Puy en Velay, idolophu yembali, i-waterfall "La baume", okanye iLe lac du Bouchet (ichibi elijikelezwe lihlathi). Ifama yemfundo ikwilali enezilwanyana ezininzi ezithandekayo.
Indlu encinci iqulathe yonke into eyimfuneko kwindawo epholileyo yokuphumla (kwiintsana nazo!). Igumbi linomphezulu we-21m2. Indawo yokuhlala iquka ishawa kunye nendawo yangasese kunye nendawo yokuhlala kunye nokulala enebhedi ephindwe kabini ye-mezzanine kunye nebhedi yesofa yabantu abadala ababini okanye abantwana ababini. Ukulala ukuya kutsho kubantu aba-4. Kukho iTV/DVD player kunye nerediyo. Indawo yokuhlala ine-microwave, i-oveni, ifriji, isikhenkcisi, umatshini wokuhlamba izitya, umatshini wokuhlamba izitya, umpheki, umenzi wekofu, iketile, itoaster, ivacuum cleaner, iseti yefondue, umatshini weraclette, intsimbi kunye nebhodi yoku-ayina, isomisi seenwele, indawo yokomisa kunye nazo zonke izixhobo zasekhitshini. Ukufudumeza kombane. Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kwindawo yegadi. Indawo yokupaka ekhuselekileyo ingaphandle kwepropathi. Kuyenzeka ukwamkela imijikelo ngezitshixo, nazo. Yonke ilinen yokulala (i-10 € / ibhedi) kunye neetawuli (5€ / umntu) izongezelelweyo. Samkela izilwanyana, izinja ezimbini ezincinci. (I-10 € eyongezelelweyo kwisilwanyana ngasinye ngexesha lonke lokuhlala) kodwa awuvumelekanga ukutshaya.
Sele ineminyaka engama-20 sibuyisela indawo ngoku (umyeni wam ngumakhi kunye nelitye, amaplanga kunye nezakhono zesintu sinomdla kuye) ngentliziyo yethu yonke. Kodwa usemninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe. Ngenxa yoko xa uhlala kwikhaya lethu uya kuba negalelo lezemali ekubuyiseleni kwaye siyabulela kuwe ngaloo nto!
Ukufumana ulwazi sikwaqesha indlu enkulu nethandekayo eSt Pierre Eynac (bona iLa Grande Maison eSt Pierre Eynac kwiwebhusayithi ka-Airbnb) enokwamkela abantu abasi-7.
Ilali igcinwe kakuhle, inobuhlobo kwaye inoxolo. Ilali eqhelekileyo ubukhulu becala eyakhiwe ngamatye nemithi ecaleni kwenduli. Umlambo omncinane (onengxangxasi encinci) uyawuwela xa ungashushu kakhulu. Encotsheni yenduli uya kuba nembono emangalisayo ngeentaba. Ngexesha leKrisimesi, ilali ikhanyiselwa ngokupheleleyo.
Siyazama ukuba nolwazi kwaye sibe luncedo, siyakuthanda ukuthetha nabantu kodwa siyakuhlonela ukuzola kweendwendwe. Siyakonwabela ukwabelana ngolwazi ngendawo yethu nabahambi.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$1563
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Bains